The choir sings as Zimbabwe's President Robert Mugabe presides over a student graduation ceremony at Zimbabwe Open University on the outskirts of Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 17, 2017. Mugabe is making his first public appearance since the military put him under house arrest earlier this week. (AP Photo/Ben Curtis)
Zimbabwe's President Robert Mugabe, center, leaves after presiding over a student graduation ceremony at Zimbabwe Open University on the outskirts of Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 17, 2017. Mugabe is making his first public appearance since the military put him under house arrest earlier this week. (AP Photo/Ben Curtis)
Zimbabwe's President Robert Mugabe presides over a student graduation ceremony at Zimbabwe Open University on the outskirts of Harare, Zimbabwe Friday, Nov. 17, 2017. Mugabe is making his first public appearance since the military put him under house arrest earlier this week. (AP Photo/Ben Curtis)
Zimbabwean President Robert Mugabe, center, arrives to make his first public appearance at a graduation ceremony on the outskirts of Harare, Friday, Nov. 17, 2017. Mugabe made his first appearance since the military put him under house arrest this week. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)